Iziseko Zingaba Njengezinto eziMnyama njengeAicids
Cishe malunga nomntu wonke uyazi ukuba i-acids ezininzi zininzi. Ngokomzekelo, i- hydrofluoric acid ingakwazi ukutshabalalisa iglasi (ikhemikhali awufuni ukuyidla kunye ). Ngaba uyayazi iziseko eziqinileyo ezinokubangela ukonakalisa,? Umzekelo wesiseko esilungeleyo ukutya iilazi i-sodium hydroxide (i-NaOH), eyinto eqhelekileyo yokucoca. Unokuzivavanya oku ngokwakho ngokubeka isitya seglasi kwishushu sodium hydroxy, kodwa kufuneka uqaphele kakhulu .
I-hydrodide i-sodium ikwazi ukuphelisa isikhumba sakho ngaphezu kweglasi. Kwakhona, uphendukela kunye nezinye iikhemikhali, ngoko uyaqiniseka ukuba wenza le projekthi kwisitya okanye insimbi yesitya. Uvavanye isitsha ngenomethi xa ungaqinisekanga, ngenxa yokuba esinye isinyithi esasetyenziswa ngokubanzi kwiipane, i-aluminium, iphendula ngokukhawuleza nge-sodium hydroxide.
I-sodium hydroxide iphendula ne-silicon dioxide kwiglasi ukuze yenze i-sodium silicate kunye namanzi:
Ukucima iglasi kwi-sodium hydroxide mhlawumbi akuyi kuyenza i-pan yakho nayiphi na into enhle, ngoko ke amathuba okufuna ukuyilahleka xa uyenziwe. Nciphisa i-sodium hydroxide nge -asidi phambi kokulahlwa kwepen okanye ukuzama ukuyihlambulula. Ukuba awukwazi ukufikelela kwi-lab ye-chemistry, oku kuya kufumaneka nge-viniga eninzi (i-acid acetic acid) okanye umthamo omncinci we-muriatic acid (i-hydrochloric), okanye (ekubeni ihlamba i-cleaner, emva koko konke), Unokuhlamba i-sodium hydroxide kunye neenyawo kunye namanzi amaninzi.
Awunokuba nomdla ekubhubhiseni iiglasi ze-sayensi, kodwa kuyafuneka ukuba uzi ukuba kutheni kubalulekile ukususa izitya kwi-sink yakho xa uceba ukusebenzisa umbane ococekileyo kwaye kutheni akuyona into efanelekileyo yokusebenzisa ngaphezulu kwexabiso elinconywayo mveliso.
Iimpawu zamaKhemist kunye nePuns - Ngeenkcazo
IRose Water Recipe
Iingxaki zootitshala abaye banciphisa ukusebenza kwabo bonke
Izibonelelo zoNcedo kunye noTyhulo lweeNkcazo zeMigangatho
I-Wyclef Jean yeTumi eziPhambili kakhulu
UJuan Luis Guerra - Iingoma ezilungileyo